Visa vaovao - Poltava Medical & Dental Academy
Mpiadina dia tokony hijery ny akaiky indrindra Masoivoho Ukraine na masoivoho na mila visa hiditra Ukraine. Ny fanasana na fieken-keloka taratasy navoakan'ny Okrainiana Medical & Dental Academy, Fifandraisana iraisam-pirenena sampan-draharaha.
Mba handray ny Fanasana mba Halalino sy fieken-keloka Taratasy, ny mpianatra dia tokony hanome ny tsara toetra Notarafina dika mitovy ny antontan-taratasy manaraka ireto,
International Passport / Travelling kevitra rakitra pejy miaraka amin'ny sary eo amboniny. Full Name ny mpianatra sy ny serial Isan'ny Passport dia tokony ho mazava tsara VISIBLE.The manan-kery ny Passport tsy latsaky ny manaraka 1 taona
Fanabeazana Documents O haavon'ny / SSCE / HSSC,Bachelor na Master Degree raha misy
Ny E-mail amin'ny notarafina ny antontan-taratasy voalaza etsy ambony dia tokony ahitana ireto fampahalalana manaraka ireto tsirairay avy
Name, Afovoany anarana sy ny Surname
Date & toerana nahaterahana
OKRAINIANA MEDICAL STOMATOLOGICAL Academy (MSA) manomboka tolotra namoaka taratasy tamin'ny Janoary isan-taona sy ny fanasana avy amin'ny volana APRILY.
Mpianatra dia tsy maintsy manana ny hamindra ny fiampangana HO zavatra ilaina famandrihana,visa ho fanohanana taratasy sy ny iraka .Which dia voalaza ao amin'ny taratasy fieken-keloka amin'ny 10 andro fiasana raha tsy izany isika dia afaka hanafoana ny admission.After nahazo fiampangana University dia hanomboka fanodinana ho an'ny Fanasana Taratasy ary dia haka 4 andro fiasana mba hamita ny fomba fanasana taratasy.
Mpianatra dia tokony hifandray Ukraine masoivoho ao amin'ny / ny firenena mba hampiharana ny mpianatra rehefa avy nahazo visa ho taratasy fanasana tany am-boalohany avy amintsika. Any amin'ny tany sasany Ukraine masoivoho manomboka miara-miasa amin'ny Visa Mpianatra Applications sy ny olana mpianatra Visa amin'ny faha-15 volana Jolay ny faha-15 Novambra matetika no omena ny desambra / Martsa(Mazava ho azy fa ny fanomanana).
Taorian'ny taratasy dia tokony ho atolotra any Ukraine Masoivoho mba hahazo ny mpianatra Visa.
Antontan-taratasy takiana amin'ny fahazoana mpianatra Visa
Birth Certificate, Nadika ho amin'ny fiteny ukrainien sy ny ara-dalàna teny amin'ny Notary Public na Ukraine Masoivoho
Original School Certificates O level/ SSCE/ HSSC, Bachelor na Master Degree raha misy, Nadika ho amin'ny fiteny ukrainien sy ny ara-dalàna teny amin'ny Notary Public na Ukraine Masoivoho
General Health- Medical Certificate namoaka fara fahakeliny, roa volana mialoha ny fidirana ho any Ukraine. Nadika ho amin'ny fiteny ukrainien sy ny ara-dalàna teny amin'ny Notary Public na Ukraine Masoivoho Dia tsy maintsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fahasalamana
HIV- SIDA Ratsy Certificate namoaka roa volana raha kely indrindra mialoha ny fidirana. Nadika ho amin'ny fiteny Okrainiana sy ara-dalàna ny Notary Public na Ukraine Masoivoho. Dia tsy maintsy ho ara-dalàna amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fahasalamana
Sponsorship Letter from the Parents/Person who is going to bear the expenses for student during stay/ studying in Ukraine. Tsy nisy fepetra ho an'ny firenena rehetra
Banky Statement mba hanaporofoana fahafahana ara-bola. Tsy nisy fepetra ho an'ny firenena rehetra
The student needs to check with Ukraine embassy in his/ her country of permanent/ temporary stay. Okraina masoivoho tsy mitaky Rosiana / Okrainiana fandikan-teny ho amin'ny firenena sasany.
Mba ho azo antoka talohan'ny nandaozany ny tany rehetra, hoy ambany dia tokony ho antontan-taratasy miaraka aminao, ny fifindra-monina manam-pahefana tao amin'ny seranam-piaramanidina dia hangataka ireo antontan-taratasy.
Result of HIV – medical checkup certificate (dia tokony ho nadika tamin'ny fiteny ukrainien sy ara-dalàna ny Notary vahoaka na ny Ukraine masoivoho any amin'ny firenenao).
General medical certificate / Ara-batana Fitness taratasy (dia tokony ho nadika tamin'ny fiteny ukrainien sy ara-dalàna ny Ukraine masoivoho any amin'ny firenenao).
Original Birth certificate ( dia tokony ho nadika tamin'ny fiteny ukrainien sy ara-dalàna ny ny Ukraine masoivoho any amin'ny firenenao).
Original Fanasana taratasy.
The flight ticket should be to and fro to your home country (i.e., misokatra tapakila).